Momba anay | SUNSUM HOUSEHOLD CO., LTD
Sunsum household Co., Ltd.dia miorina ao amin'ny Tanànan'i Ningbo, faritanin'i Zhejiang, izay tanàna seranan-tsambo manan-danja amin'ny morontsiraka atsimoatsinanan'i Sina. Ny fomba amam-panao varotra vahiny maharitra sy ny tombony azo amin'ny fanakaikezana ny seranan-tsambo anaty dia nahatonga an'i Ningbo tanàna varotra vahiny mahery vaika ary niteraka orinasam-pandraharahana iraisam-pirenena matihanina toa ny orinasanay.
Ny orinasanay dia natao manokana tamin'ny karazana varotra plastika 、 vy sy vokatra vita amin'ny silikôly ary fanomezana fampiroboroboana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena mihoatra ny 10 taona. Ny tena vokatra ao anatin'izany ny trano ware & fisotroana andiany ware.
Ny orinasan'ny kaoperativa anay dia nohamarinin'i Disney, NBCU, AVON, Sedex, BSCI. Miaraka amin'ny fanamarinana mendrika toy izany, niara-niasa tamin'ny ankamaroan'ny marika fahazoan-dàlana izahay, toa ny Disney, Minions, Mattel, DC, Marvel, Paw Patrol. Ary andefaso entana maro koa any amin'ny fivarotana lehibe toa an'i Tesco, Coles.
Manana ekipa QC matihanina izahay, fomba fanao fanaraha-maso henjana, ary mitazona fiaraha-miasa akaiky amin'ireo masoivoho mpanara-maso matihanina sy masoivohom-panadinana hanomezana vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifa.
Manana fahaiza-manao OEM & ODM matanjaka izahay, ny famaranana ny tampony, ny fanontana ny logo ary ny fonosana dia azo alamina. Ny bobongolo dia azo zahana araka ny santionany sy ny sary atolotry ny mpanjifa.
Manana traikefa amin'ny indostrialy mihoatra ny 10 taona izahay ary manana fahaiza-manao fampidirana am-pamokarana mahery, afaka mamaly haingana ireo takiana ary manome serivisy avo lenta.
Mirehareha amin'ny vokatra marobe isan-karazany izahay amin'ny vidin'ny fifaninanana miaraka amina kalitao tsara, valiny haingana, fotoana fandefasana haingana ary serivisy tsara. Miara-miasa aminay, ianao dia hahatsapa ny serivisy manam-pahaizana manokana sy ambony an'ny ekipa miasa. Izahay dia natokana mba hanamorana ny orinasanao hahazoana tombony farany ambony.